गीतमा आप्पा र छोराको प्रेम (भिडियो)
प्रकाशित : आइतबार, असार ०१, २०७६१८:३९
फिल्म । अभिनेता दयाहाङ राई स्टारर फिल्म ‘आप्पा’ को नया गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ‘साउने झरी’ बोलको ओएसटीमा विज्ञान बराइलीको स्वर रहेको गीतमा अनमोल गुरुङ र सैकत देवले संगीत भरेका छन् । गीतको शब्द लेखन उमेश उपमाले गरेका हुन् । बाबा र छोराको कथालाई गीत मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । गीतमा दयाले आप्पाको कर्तव्य पुरा गरिरहेका छन् ।
असार १३ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘आप्पा’ ले एक छोरा र पिताको सम्बन्धको कथा भन्छ । फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ पिताको भूमिकामा छन् । फिल्मलाई अनमोल गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । यो अनमोलको डेब्यु निर्देशकिय फिल्म हो । अ माउन्टेन स्टोरीज प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मका कार्यकारी निर्माता माबो हाङ हुन् ।
यसमा रुदेन सादा लेप्चाको लगानी छ । फिल्ममा सिद्धान्त राज तामाङ, अल्लोना काबो लेप्चा, तुलसी घिमिरे, अरुणा कार्कीलगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ । निर्देशक गुरुङको कथा रहेको फिल्ममा उनको र उमेश उपमाको पटकथा तथा संवाद छ । शैलेन्द्र डि. कार्कीको छायांकन, अनमोल गुरुङ र शैकात देवको संगीत, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन फिल्ममा छ ।
उमोङ्गको गीतमा इष्टु र अभिषेक
‘जिरो’ असफलतापछी शाहरुखले गरे नेक्स्ट शुटिङ ‘प्रि-पोण्ड’
संजयको फिल्ममा कृति ?
मल्टिप्लेक्समा ‘मारुनी’ लाई किन कम शो ?
छुल्ठिमको ‘डायरी’ युट्युबमा (भिडियो)